अन्डरवल्र्ड डन दाउदको मुम्बई हमला लगत्तैको अन्तर्वार्ता | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
अन्डरवल्र्ड डन दाउदको मुम्बई हमला लगत्तैको अन्तर्वार्ता	‘मोदीको पार्टीलाई पैसा बुझाएको छु’
साउन १६ गते, २०७२ - ०७:५२
सन् १९९३ मा भारतको मुम्बईमा भएको बम हमलामा सम्लग्न भएको भन्दै याकूब मेमनलाई भारतीय सर्वोच्च अदालतले जुलाई ३० मा फाँसी दियो । फाँसीपछि अन्डरवल्र्ड डन दाउद ईब्राहिमले भारतीय सरकारसँग त्यसको बदला लिने बताएको समाचार भारतीय मिडियाहरुमा सार्वजनिक भएका छन् । भारतको आर्थिक राजधानी मुम्बईमा भएको श्रृङ्खलाबद्ध बम हमलाका मुख्य योजनाकार मानिने दाउदले सन् १९९४ मा याकूब समातिए पछि इन्डिया टुडेका लागि शिला भट्टलाई टेलिफोन अन्तर्वार्ता दिए । उक्त अन्तर्वार्तामा उनले आफुले भारतीय कांग्रेसआई बाहेक सबै पार्टीलाई चन्दा स्वरुप पैसा दिने गरेको खुलासा गरे । मुम्बई बम हमलामा सम्लग्न भएको निष्कर्ष निकाल्दै भारतीय सर्वोच्च अदालतले याकूब मेमनलाई फाँसी दिएको सन्दर्भ पारी उक्त अन्तर्वार्ता हामीले प्रकाशित गरेका छौं । इन्डिया टुडेको उक्त अन्तरवार्ता खबरडबलीका लागि सहकर्मी सरिता कार्कीले गरेको अनुवादको सम्पादित अंश –सम्पादक
० याकूब मेमन समातिए नि, यसले तपाईंलाई केही फरक पारेको छ ?
उनी समातिएकोमा म धेरै खुसी छु । कम्तीमा अनुसन्धान ठिक ढंगले भइरहेको छ भन्ने बुझियो ।
० तपाईंले नै उनलाई भारत पठाएको होइन ?
मैले किन पठाउने ? मेरो उनीसँग कुनै सम्बन्ध नै छैन । मैले अहिलेसम्म उनको अनुहार पनि देखेको छैन ।
० मुम्बई हमलामा आफ्नो संलग्नता छैन भनेर देखाउनका लागि तपाईंले याकूबलाई आत्मसमर्पण गर्न भन्नुभएको होइन ?
याकूब तपाईंसँगै छन् । उनलाई नै किन सोध्नुहुन्न ? समाचार थाहा पाएपछि नै मैले यसमा मेरो संलग्नता छैन भन्ने कुरा भन्न चाहेको थिएँ । सम्झिनुस त, याकूब आफैंले टेलिभिजनमा सम्पूर्ण देशवासीका सामु मसँग नभेटेको स्पष्टिकरण दिएका थिए ।
० तर तपाईंको नाम केही नभइकन त्यत्तिकै पनि त आएको छैन ?
यो राजनीतिक कारणले हो । उनीहरुलाई सोध, मेरा विरुद्ध के प्रमाण छ । मलाई लाग्छ म शरद पावर र एस.बी चभानको राजनीतिको शिकार हुँ ।
० तर तपाईंलाई पवारको साथी पनि त भनिन्छ नि ?
हामी न त साथी हौं न दुश्मन नै । जहिले मिडियाले पावरको सम्बन्ध दाउदसँग छ भन्न थाले त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले मलाई उक्त घटनामा सम्लग्न गराउन पुलिसलाई निर्देशन दिए । तर चभानले उक्त घटनामा मेरो संलग्नता भएको देखाउँदै पावरसँग मेरो सम्बन्ध भएको देखाउन खोजे । यसमा उनको आफ्नै स्वार्थ छ । पवारलाई मसँग सम्बन्ध भएको देखाएमा उनले तत्काल पदबाट हटाउन उनलाई सजिलो थियो । त्यसैले ती दुबैले मलाई आफ्ना आफ्नै स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न खोजे ।
० तपाईं सन् १९९३ मार्च १२ मा मुम्बईमा श्रृङ्खलाबद्ध बिस्फोट हुँदा कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?
म त्यतिबेला घरमा नै थिएँ । सिन्धिया, मुस्लिम, गुजरातीबाट फोनको बाढी आइरहेको थियो । म निकै अचम्मित थिएँ, त्यस विषयमा केही भन्न सकिरहेको थिइनँ । तर जब एउटा कार भेटियो तब केही प्रमाण भेटिएकोमा मलाई थोरै भएपनि हल्का महसुस भयो र अब डराउनुपर्ने केही कुरा छैन जस्तो लाग्यो । त्यसबेला अब चाँडै नै वास्तविकता प्रष्ट हुन्छ होला भन्ने लागेको थियो । तर एकजना दाउद तक्लुनामका व्यक्तिले सोधपुछको क्रममा मेरो नाम लिएको थाहा पाएँ । त्यतिबेलासम्म पत्रपत्रिकाले बम्बे पुलिसका प्रमुख सम्रालाई घटनामा मेरो संलग्नताको बारेमा प्रश्न सोध्न सुरु गरिसकेका थिए । उनले यसबारे केही भन्न सकिरहेका थिएनन् । एकजना मानिसले मेरो नाम लिएको आधारमा नै मेरो छवि बिग्रिएको थियो ।
० तपाईंले टाइगर मेमनलाई चिन्नुहुन्छ ?
उनीसँग मेरो व्यक्तिगत र व्यवसायिक कुनै पनि सम्बन्ध छैन । उनलाई मैले सबैले चिनेजसरी चिन्छु । उनलाई मैले धेरैपटक देखेको पनि छु ।
० तर टाइगर र तपाईंको त एउटै प्रकारको व्यवसाय छ नि ?
पुलिसलाई टाइगर मेमनको रेकर्ड निकाल्न लगाएर उनको मसँगको सम्बन्धबारे निष्कर्ष निकाल्न भन्नुहोस् । यदि उक्त रेकर्डले उनको र मेरो सम्बन्ध भएको देखाउँछ भने तपाईंलाई म बिरुद्ध जे गर्न पनि छुट दिनेछु ।
० के तपाईंले मुम्बई ब्लास्टमा आफ्नो केही संलग्नता छैन भनेर पुष्टि गर्न खोज्नुभएको हो ?
हो, मलाई विश्वास गर्नुहोस् । म मेरो छाती चिरेर त देखाउन सक्दिनँ तर मुम्बई ब्लास्टमा मेरो केही संलग्नता छैन ।
० याकूब मेमनले ब्लास्टको योजना आइएसआइको भएको बताएका छन् । तपाईंको आइएसआइ र टफिक जालियावालासँगको सम्बन्ध के हो ?
मलाई आइएसआइ बारे केही पनि थाहा छैन । जहाँसम्म जालियावालाको कुरा छ, मैले उनलाई विगत १० वर्षदेखि दुबईमा बिजनेस गरिरहेका बिजनेसम्यानको रुपमा चिनेको छु ।
० हामीलाई अहिले थाहा भयो जालियावाला आइएसआइमा संलग्न छन् । के तपाईंलाई यो बारे केही थाहा थियो ?
यदि मलाई उनी आइएसआइका सदस्य हुन् भन्ने थाहा भएको भए म उनको विवाह समारोहमा किन जान्थें होला, जब कि मेरो नाम मुम्बई हमलाको मुख्य योजनाकारको रुपमा फैलाइएको थियो । अथवा मैले आफैंले आफैंलाई उनको विवाहको भिडियो रेकर्डिङमा किन कैद गर्न दिन्थें होला ?
० तपाईंलाई टाइगर मेमन, जालियावाला र बम्बे अन्डरवल्र्ड बारे थाहा छ । तपाईंलाई लाग्छ कि मुम्बई ब्लास्ट पाकिस्तान र मेमनको राणनीतिमा भएको हो ?
मलाई लाग्छ यो घटनामा टाइगर मेमन संलग्न छन् किनभने उनको आफ्नै भाइले सो कुरा बताइरहेका छन् ।
० तर टाइगर एक्लैले यस्तो ठूलो घटना घटित गराउन सकेनन् होला । तपाईंले आफू निर्दोष छु भनेर कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ?
टाइगर र उनको भाइ जो मुम्बई ब्लास्टका मुख्य योजनाकार हुन्, उनीहरु नै घटनामा के भएको थियो भन्ने बारे बताउने सबैभन्दा राम्रा व्यक्ति हुन् ।
० तपाईंलाई ३ सयभन्दा बढि मानिस मारेको आरोप लागेको छ । अनुसन्धानकर्ताले तपाईंमाथि नै औंला ठड्याएका छन । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
आफू निर्दोष छु भनेर देखाउनको लागि म जे गर्न पनि तयार छु । तर मलाई जसको बारे केही थाहा छैन त्यस बारे बोल्न लगाइनु हुँदैन ।
० पश्चिमी भारतमा तपाईंको बलियो सञ्जाल थियो जतिबेला ब्लास्ट भएको थियो ।
त्यसोभए मुम्बई ब्लास्टमा मेरा कति मानिसहरु सहभागी भए त ?
० पुलिसले जे भन्छ हामीले त्यो नै विश्वास गर्ने हो । यदि तपाईं आफू निर्दोष छु भनेर प्रमाणित गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा कसको संलग्ना थियो भनेर तपाईंले भन्नै पर्छ ।
यो घटनामा टाइगर मेमन संलग्न छन् भने अरु कुरा मैले के भनूँ ।
० टाइगर पछाडि को छन् ?
यस विषयमा तपाईं किन उसको भाइलाई सोध्नुहुन्न ?
० तपाईं निर्दोष हुनुहुन्छ भने किन आत्मसमर्पण गर्नुहुन्न त ?
मलाई आत्महत्या गर्न त्यति मनपर्दैन । अनुसन्धान सुरु गर्नुभन्दा पहिले नै पुलिसले मलाई दोषी बताएको थियो र पछि म विरुद्ध प्रमाण जम्मा गर्न सुरु गर्यो । म मेरो जीवनमा यस्तो कायर काम कहिले पनि गर्न सक्दिनँ । यदि मैले गर्नु नै थियो भने म यो तरिका अपनाउँदैनथें । हिंसा र हत्या भड्काउने विरुद्ध म लाग्थें होला सर्वसाधारण विरुद्ध होइन ।
० तपाईं घटनामा संलग्न हुनुहुन्न होला तर के तपाईंले यो घटनामा लगानी गर्नुभएको थियो ?
मैले एक पैसा पनि दिएको छैन । हेर्नुहोस्, म ग्याङ्ग वार र स्मगलिङको मान्छे हुँ, मलाई यस्तो योजनाको बारेमा कसरी थाहा हुन्छ ?
० तर उनीहरुले स्मग्लिङ नेटवर्कको सहायता लिएका छन्, यस्ता क्रियाकलाप बारे ज्ञान हुने व्यक्तिलाई नै उनीहरुले प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
तपाईं के भन्दै हुनुहुन्छ ? मसँग पुलिसले जस्तो तर्क नगर्नुहोस् । म निकै हतास मनस्थितिमा छु । उनीहरुले मलाई मुसाजस्तो दुर्बल बनाइदिएका छन् । म जालमा फसेको छु, खुल्ला रुपमा हिँड्न सकेको छैन ।
० याकूबले पनि तपाईं जालियावालासँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ भनेका छन् ।
ती जालियावाला व्यापारी र स्मग्लर हुन् । म दुबईमा भएका सबैसँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्छु । म मुस्लिम भएका कारण मैले के पाकिस्तानीसँग बोल्नुहुँदैन भन्ने छ ?
० ब्लास्टको पछाडि जालियावाला संलग्न छन् जस्तो लाग्छ ?
मैले उनको संलग्नताको बारेमा कहिले पनि सुनिनँ । वास्तवमा म यसको बारेमा थाहा पाउँदा निकै अचम्मित भएँ ।
०के तपाईं दुबईमा पनि अनुसन्धानभित्रै हुनुहुन्छ ?
दुबईका मानिसहरुले मलाई समर्थन गर्छन् । तर भारतबाट भने मलाई दबाब छ । ममाथिको दोषले मानिहरुलाई भ्रममा पारेको छ । भारतीय मिडियाले मलाई दोषी बनाइदिसकेका छन् । र सरकारले जे भन्छ, उनीहरुले त्यहि लेख्छन् ।
० मुम्बईमा तपाईंको केही सम्पत्ति छ ?
छन् । मेरा अभिभावकको र दाइभाइको छ ।
० बेनामी सम्पत्ति बारे के भन्नुहुन्छ ?
किन, मुम्बईभन्दा अरु कुनै ठाउँ छैन र बेनामी सम्पत्ति राख्न ? जब मैले वैधानिक रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नसक्छु भने बेनामी सम्पत्तितिर किन लाग्ने ? मैले करोडौं मूल्य पर्ने सम्पत्ति अरुको नाममा किन राखौं ?
० मानिसहरु भन्छन् तपाईं पवारको मान्छे हो ।
होइन । म पवारको मान्छे होइन । न त चभान (चौहान)सँग मेरो कुनै सम्बन्ध छ । यदि तपाईंलाई पवार मेरो सम्पत्तिको रखवाला हुन् भन्ने लाग्छ भने तपाईंहरु नै राख्नुहोस् । म तपाईंलाई लेखेरै दिन तयार छु ।
० आफ्ना बारे केही भनिदिनुस् न ?
मैले उर्दूमा एसएससी गरेको छु । म विगत ९ वर्षदेखि विवाहित छु । मेरो एउटा छोरा र तीनजना छोरीहरु छन् ।
० तपाईंको वर्तमान आर्थिक स्रोत के हो ?
मसँग विगतको पैसा नै धेरै छ । तपाईंलाई डोनेसन चाहिएको हो ?
० राजनीतिक दललाई पैसा दिने गर्नुभएको छ ?
कंग्रेसआइ बाहेक म सबैलाई पैसा दिन्छु ।
० तपाईं पाकिस्तानमा बस्नुहुन्छ ?
तपाईं किन मेरो पछि लाग्नुभएको छ ? मलाई शान्तसँग बस्न दिनुहोस् । ममाथि छानो अडिन दिनुहोस् । म पाकिस्तान गइरहन्छु ।
० तर कसरी ? तपाईं साधारण मानिसजस्तो घुम्न सक्नुहुन्न ।
बाजी लगाउनुहुन्छ ? तपाईं संसारको कुनै पनि ठाउँ रोज्नुहोस् । मलाई त्यहाँ भेट्नुहुन्छ ।
० तपाईं लण्डन र जेनेभा त जानसक्नुहुन्न किनभने भारतले प्रत्र्यपण सन्धीमा हस्ताक्षर गरेको छ ।
म औपचारिक रुपमा कतै पनि जाँदिन । यदि म कुनै ठाउँमा गएँ भने तपाईंलाई के को टाउको दुखाई ? म सधैं प्रत्र्यपण सन्धी नगरेको ठाउँमा जान्छु ।
०. तपाईंको भर्खरको फोटोहरु हेर्दा तपाईंले आफ्नो स्वरुपमा निकै परिवर्तन गर्नुभएको देखिन्छ । किन होला ?
केही पनि परिवर्तन गरिएको छैन । मात्र मैले जुंगा काटेको छु ।
० हमलाको दोषी बताएसँगै तपाईंको जीवनमा केही परिवर्तनहरु आए ?
केही पनि छैन । मलाई एउटै कुरा मात्र खट्किएको छ कि यस्तो अन्याय मलाई किन गरियो ? म साधारण रुपमै भ्रमण गर्छु । तपाईंले मेरा थुप्रै तस्बिरहरु देख्नुहुन्छ जसमा म स्मार्ट देखिन्छु ।
० अब तपाईं के चाहनुहुन्छ ?
न्याय । म भारतीय जनताको अघि न्याय चाहन्छु । भारतीय पुलिस जुन तरिकाले अघि बढिरहेको छ, मलाई लाग्दैन मैले केही न्याय पाउँछु । म एक तटस्थ देशमा प्रसाय गर्न रुचाउँछु । मृत्यु निश्चित छ र यो एकपटक मात्रै आउँछ । मलाई यसमा केही डर छैन । तर मलाई गलत प्रमाणहरुसँग डर लाग्छ । म फेरी एकपटक भन्छु कि भारतीय पुलिसको अनुसन्धान गलत छ । मैले धेरै लामो चार्जशिट पढेको छु जसमा मानिसहरुले दुबईमा आएर मलाई भेटेको बताएका छन् । भारतमा मेरा २ हजार मानिस छन् । के मैले आफ्ना मान्छेहरु ती मानिसकोमा पठाउन सक्दैनथें होला अथवा के मैले तीमध्ये कुनै एक मानिससँग फोनमा कुरा गर्न सक्दैनथें होला ?
० के तपाईंले आफू स्वच्छ मानिस भएको दाबी गर्नुहुन्छ ?
होइन । मैले म कुनै मन्दिरको पण्डित हुँ भनेको छैन । म खराब छु तर भारतीय सरकारले सोचेजति पनि होइन । म कुनै परी होइन न त कुनै अभतार । तर पनि म भन्छु, मुम्बई ब्लास्टमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । मलाई लाग्छ मुम्बई ब्लास्टको मुद्दा समाधान गरिसकिएको छ । सिबिआइलाई यसबारे सबै थाहा छ ।
साउन १६ गते, २०७२ - ०७:५२ मा प्रकाशित